Mpiaro ny Finoana
"Mba hiezahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina." - Joda 3.
Mirongatra manerana izao tontolo izao ny asa ratsy amin'ny endriny samihafa, ary ny mponin'ny tany no mandoto azy. Ny planin'Andriamanitra mandrakizay dia efa ho tanteraka, ary efa antomotra ny fiafaran'ny zavatra rehetra. Izao no fotoana tokony hivondronan'ireo izay mahalala ny fahamarinan'Andriamanitra ho ao ambanin'ny fanevan'ny ran' ilay Imanoela Andriana mandrakizay. Tokony hijoro ho mpiaro ny fahamarinana izay nomena ny olona masina izy ireo. Tokony hasehon'izy ireo amin'izao tontolo izao ny atao hoe mitandrina ny lalàn'Andriamanitra sy mihazona ny finoana an'i Jesôsy. Tokony hapariak'izy ireo mazava ny fahazavany, dia tara-pahazavana mahery hanazava ny dian'ireo izay mandeha amin'ny maizina. Ny miaramilan'i Kristy dia tokony hitsangana, hifanohana, handeha amim-pahitsiana manoloana ny fahamarinana, hanandratra ny lalàn'i Jehôvah.
Ireo izay miala amin'ny toromarika mazava nomen'Andriamanitra dia hanohana ny fahadisoan-kevitra, ary hanomboka hijoro hanohitra ny miaramilan'i Kristy. Ho hita miharihary hoe iza no mpitarika azy ireo noho ny asan'izy ireo izay hanohitra ny fahamarinan'Andriamanitra sy noho ny fampiasany hery famoretana hanerena ny feon'ny fieritreretan'ny hafa hanaiky fampianaran-diso. Izao no fotoana tokony hanapahany aminy fahamarinana; ary Andriamanitra dia nanome hery miasa mangina araka izay fatra sahaza ny tsirairay mba hampiasaina ho voninahitry ny Anarany sy hanasoavana ny hafa. Tsy misy mpitantam-pananana mahatoky hidonanam-poana amin'ny fotoana toy izao, tsy tokony hisy amin'izy ireo ny hianina fotsiny amin'ny fiainana ho an'ny tenany. Ireo izay miray amin'i Kristy dia hahatsapa fa maro ireo fanahy izay mila ny fanampiany sy ny ohatra asehony ary ny hery miasa mangina ananan'izy ireo. Ho tsapan'izy ireo fa ny tenany dia afaka ny ho fitaovana ampiasain'i Jesôsy hamonjena ireo izay nanolorany ny ainy. Izany no tokony ho fanandraman'izay rehetra milaza fa mino ny hafatry ny anjely fahatelo. Tokony hanana fanandramana feno ny tanora sy ny lehibe ary ho feno fifaliana ny amin'ny fivavahan'i Kristy. -YI, 29 Jona 1893.